सुरक्षा Archives - Page2of 78 - Lokpath Lokpath
११ माघ २०७६, शनिबार १६:४२
धादिङ, सप्तरी, बैतडी, नवलपरासी (पूर्व) र सर्लाहीका विभिन्न स्थानमा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा परी ५ जनाको मृत्यु भएको छ । धादिङ, गल्छी गाउँपालिका ६ बैरेनी बजारस्थित सडकमा प्रदेश नम्बर ३-०२००९
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा २४ वर्षीय युवक पक्राउ
३५ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका १ खोपरी बस्ने २४ वर्षीय विक्रम थारुलाई शुक्रबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । थारुले ती महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने
असुरक्षित सडक : पैदल यात्रु यसरी मारिन्छन्, बढ्दैछ ‘हिट एण्ड रन’ का घटना
काठमाडौं । मङ्सिर २८ गते काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा बिहानै मन्दिरबाट फर्किदै गरेकी ४२ वर्षीय लीला देवकोटालाई चारजना सवार गाडीले ठक्कर दिएर फरार भयो । गाडीमा सवारमध्ये एकजना थिइन् मोडल परमिता आरएल
सडक नियम मिचेर भाग्नेहरु सावधान! ‘प्रहरी घरमै आइपुग्छ’
काठमाडौं । माघ ६ गते सार्वजनिक भएको एउटा तस्वीरले धेरैजनाको ध्यानाकर्षण ग-यो । तस्वीरमा एकजना ट्राफिक प्रहरीले ना १ झ १४२५ नम्बरको नेपाल प्रहरीकै गाडीलाई ह्वील लक गर्दै छन् ।
नेपालका गिरोह र भारतीय पुजारीको डरलाग्दो ‘सेटिङ’, अन्ततः प्रहरीले यसरी पक्रियो अभियुक्त
काठमाडौं । मोडलिङको प्रलोभनमा पारी युवतीलाई बोर्डर पार गराउन खोज्ने गिरोहलाई प्रहरीले रङ्गेहात पक्राउ गरेको छ । यही पुस १० गते टेकुस्थित महानगर प्रहरी परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले उक्त
पाकिस्तान-श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट, अत्यन्त कडा सुरक्षा व्यवस्था
एजेन्सी । श्रीलंका र पाकिस्तान बीच रावलपिन्डीमा आयोजित पहिलो टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगितामा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ । एक दशकअघि श्रीलंकाली टोलीमाथि पाकिस्तानमा सन् २००९ मा साङ्घातिक हमला भएयता
काठमाडौं । वर्षौंदेखि हकअधिकारका लागि लडिरहेका छन् महिला । अस्तित्वका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । तिनै संघर्षरत महिलाहरुका लागि यो विश्व कतिको सुरक्षित छ ? विश्वको कुरा छोडौं, हाम्रो देश
११ लाख नेरु र ६ लाख भारुसहित दुई युवक पक्राउ
काठमाडौं । महोत्तरी प्रहरीले स्रोत नखुलेको ११ लाख नेपाली र करिब ६ लाख भारतीयसहित दुई जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार
दिनदहाडै २ लाख चोरी, सिसीटिभी फुटेजमा देखिएका अधबैंसे को हुन् ?
काठमाडौं । मादी पावर प्रालिमा दिनदहाडै २ लाख रुपैयाँ चोरी भएको छ । यही असोज २४ गते पानीपोखरीस्थित कार्यालयबाट करिब २ लाख रुपैयाँ चोरी भएको हो । कम्पनीका बिज्नेस म्यानेजर
नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको कार्यालयमा शङ्कास्पद वस्तु फेला
काठमाडौं । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको कार्यालयमा आज शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ । वडा नं ६ समुन्द्रटारस्थित गाउँपालिकाको कार्यालयभित्र सकेट बमजस्तो शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । गाउँपालिकाको